3rd October 2018, 05:49 pm | १७ असोज २०७५
'एसिड आक्रमणले श्रीमती आइसियूमा छिन्। उपचार खर्च छैन। बचाउन सहयोग गर्नुपर्‍यो,' उनले यसै भनेका थिए चितवनको भरतपुर अस्पतालबाट।
शिक्षण अस्पतालमा हामी पुग्दा फोनमा व्यस्त थिए उनी। 'सास मात्र बाँकी छ, हेरिनसक्नु भा'को छ अनुहार। अझै के हुने हो पत्तो छैन,' यति भनेर फोन काटे। फोन खल्तीमा राख्दा दाहिने हातमा ठूलो अक्षरमा प्रस्ट ट्याटु देखियो जसमा लेखिएको थियो - 'वसन्ती'। वसन्ती अर्थात् उनकी श्रीमती जो अहिले अस्पतालको शैयामा संघर्षरत छिन्।
'हेर्नुस्, कस्ती थिइन्, अहिले कस्ती भइन्। मलाई सपना हो कि जस्तो लागिरहेछ,' वसन्तीलाई देखाउँदै उनले भने।
एसिड आक्रमण यमनारायणका लागि विश्वास नै गर्न कठिन कुरा हो। तर, यथार्थ उनको सामु छिन्। त्यसैले वसन्ती जस्तै विक्षिप्त छन्, यमनारायण। श्रीमतीलाई हेर्दै टोलाइरहन्छन्। घटनाबारे सम्झने मनै छैन। भन्छन्, 'मेरो उपचार गर्न श्रीमतीले विदेशबाट बोलाएकी। उनकै उपचार गर्नुपर्‍यो मैले।'
यमनारायण विदेशबाट नेपाल आएको एक महिनामात्र भयो। बिरामी भएर काम गर्न नसकेपछि श्रीमतीले भनेकी थिइन्, 'आउनुस् नेपालमै केही गरौँ। कति बस्नुहुन्छ अर्काको देश?'
भने, 'सबै चाहना चकनाचुर भयो। पाँच सात लाख ऋण लाग्यो। अब त मरिगए पनि विदेश जान्न। नेपालमै बस्छु।'
'किन हान्यो त एसिड?'
'सामान्य मानेर बस्दा यो सब भयो। मैले भर्खरै थाहा पाएँ,' यमनारायणले भने, 'पहिले नै थाहा पाएको भए यो घटना हुन्थेन होला।'
१५ दिनदेखि अस्पतालमा बस्दा यमनाराण पनि बिरामी नै भइसकेका छन्। केही सोच्न सकेका छैनन्, अब के होला। अस्पतालमा सुरुका दिन एकदमै कठिन रहे उनका लागि। चितवन अस्पतालले पैसाविना औषधि नदिँदा संकट भोगे। तर, अहिले उपचारमा सहज भएको छ। डाक्टरले वसन्ती खतरामुक्त भएको बताएकाले थोरै भए पनि उनको मनमा लागेको चोटमा मलम परेको छ। भन्छन्, 'पहिलाको जस्तो नभए'नि मान्छे बाँच्ने अलिकति आशा पलाएको छ।'
उनले छोराछोरीलाई पनि आशा देखाइरहेका छन्। गाउँबाट फोन गर्दा भन्छन्, 'आमालाई केही भएको छैन। हामी केही दिन काठमाडौं घुमेर फर्कन्छौं।'
हामीसँग कुरा गरिरहँदा एकछिन सोच्दै उनले भने, 'अब एकैचोटी आमाको यो रुपमा देख्दा के पो गर्ने हुन्?'
गोपालले भने, 'उसले एकोहोरो माया गर्नेरै'छ। पिछा गरिरहने। भान्जीले वास्ता नगरेपछि एसिड हानेछ। धम्की त पहिले देखि नै दिएको रै'छ। तर, कसैलाई थाहा भएन।'
विदेशिनुको पीडा भोग्दै यमनारायण : भने - मेरी श्रीमतीसँग बिहे गर्न नपाउँदा एसिड हान्यो को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।